हरेक एक किलो मोटोपनले मानिसको जीवनको दुई महिना आयु घट्ने ! - IAUA
हरेक एक किलो मोटोपनले मानिसको जीवनको दुई महिना आयु घट्ने !
ramkrishna October 24, 2017	हरेक एक किलो मोटोपनले मानिसको जीवनको दुई महिना आयु घट्ने !
काठमाडौं । हरेक वर्ष शिक्षामा गरिने खर्चले मानिसको जीवनमा ११ महिना आयु थप हुने वैज्ञानिकले बताएका छन् । हरेक एक किलो मोटोपनले मानिसको जीवनको दुई महिना आयु घट्ने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।
यो अध्ययनले मानिसलाई स्वस्थ जीवन जिउन र आयु लामो बनाउन सहयोग पुग्ने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् । ६ लाख भन्दा बढी मानिसको जेनेटिक कोड वा डिएनए यो अनुसन्धानमा प्रयोग भएको छ । धुम्रपान, रक्सी सेवान, विद्यालय शिक्षा पूरा नगर्नु वा मोटोपन मानव स्वास्थ्य र स्वस्थ जीवनका लागि घातक देखिएको अनुसन्धानमा संलग्न डा. पिटर जोशीले बताउनुभयो ।
एकै व्यक्तिमा धुम्रपान, रक्सी सेवान, विद्यालय शिक्षा पूरा नभएको र मोटोपन पनि भएमा स्वस्थ जीवनको कारक यो नै हो भनेर यकिन गर्न कठिन हुने पनि देखिएको छ । मोटोपन नियन्त्रण गर्ने, धुम्रपान कम गर्दै लैजानले, रक्सी सेवन कम गर्ने तथा शिक्षा प्राप्ती वा शिक्षा सम्बन्धी गतिविधिमा बढी समय बिताउने हो भने स्वस्थ जीवन प्राप्त गर्न सकिने र आयु पनि लामो हुने अनुसन्धानले देखाएको छ । यस सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन नेचर कम्युनिकेशनस् जर्नलमा प्रकाशित भएको छ ।weeklynepal
Previous Previous post: रंङमा प्रयोग हुने लेडबाट क्यान्सर
Next Next post: तपाईंले जिउ पुछ्ने तौलिया कस्तो छ?